သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဘုံနည်းစနစ် - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ဘုံနည်းစနစ်
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-10 မူလ:ဆိုက်ကို
ကြိမ် ဦးငွေသုဖြစ်များသောတစ် ဦး အတွက်ဘုံအသုံးပြုမှုTool Shop Rotary Tool။ သို့သော် Rotary tools များကိုလည်းအခြားအလုပ်များအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်: cTile တွင် Tletting curves (tile-concept ကိုထည့်ပါ); ပေသင့်ရဲ့ chainsaw လှည့်ဆည်း။ ယခုငါ ''သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အချို့သောနည်းစနစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုသည်။
တေလက်Cutting သည်ပင်စည်၏ပင်ပန်းသောဝင်ရိုးသို့မဟုတ်သစ်သားစပါးကို ဦး တည်ချက်တစ်လျှောက်မြင်နေသည်တစ် ဦး အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်Premium Diamond Rotary Saw Blades Setနှင့်ပင်စည်အပိုင်း၏အချင်းဝက်မှ perpendicular ။ ကွဲပြားခြားနားသော Tangential Section ၏ကွဲပြားခြားနားသောစပါးအရ၎င်းကိုသစ်သားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီနည်းလမ်းကသစ်သားစက်များအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အကုန်အကျသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပင်စည်မှတဆင့်အပြိုင်ဖြတ်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကျယ်ပြန့်ကိုမြင်တော်မူ၏ဖြင့်စိန် rotary ကိုဓါးသွား၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အနည်းဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂအများစုကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်တေလက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီဖြတ်တောက်နည်းလမ်းမှထုတ်လုပ်သော texture လည်းဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ခြင်းလှပသောသစ်သားအစေ့များ \_"Big Patternod\_", \_"Big Wood Graute \_" \_ t\_"Landscape texture \_" \_ t
ဤဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည်သစ်သားကွင်းများ၌ perpendicular ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ဖြောင့်ဖြောင့ ်. သစ်သားဖြစ်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းသေးငယ်တဲ့ rotary မြင် ပုံပျက်ရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားစပါးသည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်သည်။
နှိုင်းယှဉ်တေလက်ဖြတ်တောက်ခြင်း, ထွင်းထုခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ပို. ခက်ခဲပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပိုများလာသည်။ ခေတ်သစ်နည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်များစွာသက်သာလာလိမ့်မည်, သို့သော်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်Tangential Cutring ထက်.
ကြိမ် ဦးဖြစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ဆင်တူသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းထွင်းထု။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည်သစ်သားကွင်းများ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းတွင် perpendicular ဖြစ်ပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းမျက်နှာပြင်၏ texture သည်ဖြောင့်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလက်ကျင်းပ Rotary Saw ပုံပျက်ရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။ နှိုင်းယှဉ်တေလက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် legravedဖြတ်တောက်ခြင်း, radial ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အများဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ထို့နောက် t ကိုသူသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောသစ်သားစပါးသည်ပိုလျှံသည်။
အထက်ပါရှင်းပြချက်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသောသစ်သားပရိဘောဂများတွင်အသုံးပြုသောပြားများကိုမည်သို့ဖြတ်တောက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ,တေလက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ထိရောက်မှုနှင့်အနည်းဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများရှိသည်။ သို့သော်မှတ်တမ်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံသစ်ပင်၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းသည်ချို့ယွင်းချက်များရှိလိမ့်မည်ဒါကြောင့်တစ် ဦး နှင့်အတူပယ်ဖြတ်ခဲ့သည်အခါRotary Wood tool ကိုထိုကဲ့သို့သော waterline အဖြစ်,ဓာတ်သတ္တုလိုင်း,အနာရွတ်,အမှားအယွင်းများနှင့်ဒါအပေါ်။
အသုံးချမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သစ်ထုတ်လုပ်မှုအပင်များသည်ရောထွေးသောနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတူညီသောမှတ်တမ်းအလိုတော်အလိုရှိသည်Tangential Cutring ကိုသုံးပါနှင့်အချို့အားဖြင့်ထွင်း / radial ဖြတ်တောက်ခြင်းRotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုs။ ထို့ကြောင့်အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂအများစုမှာကြီးမားသောပုံစံများနှင့်ဖြောင့်သောလိုင်းများရှိသည်။ ၎င်းသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအနိမ့်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။
Rotary Tools များအတွက်လုံခြုံရေးသိကောင်းစရာများ
ပထမ ဦး စွာ, လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းလှည့်လာသောအခါအခြားတ္ထုများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါက၎င်းသည်သတ္တု, ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဖုန်စ်ကဲ့သို့သောသေးငယ်သောအမှုန်များကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဤသေးငယ်သောအမှုန်များသည်သင်၏မျက်လုံးများနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများကိုအလွယ်တကူ0င်ရောက်နိုင်သည်။အားဖြင့် casedrotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံ အလွယ်တကူအလုပ်ခွင်၏လေဝင်လေထွက်ပွင့်လင်းမှုများတွင်အလွယ်တကူစုဆောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လေဝင်လေထွက်ဆိုင်ရာပွင့်လင်းမှုများကိုမှန်မှန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးလေဝင်လေထွက်ရောဂါများကိုပိုမိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်တွင်စီးပွားရေးအခြေအနေအလုံအလောက်ရှိပါကလေထုသန့်ရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်လေထုသန့်ရှင်းရေးစနစ်ကိုလည်းသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာaသင်၏လက်များတုန်နေလျှင်အချို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်မြန်နှုန်းမြင့်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ထို့ကြောင့်, လက်အိတ်များကိုပွတ်တိုက်အားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သင့်သည်လက် Tool ကိုဖိုင် rotary။ ထို့အပြင်သင်၏ workbench ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရမည်, ၎င်းသည် rotary tool ပေါ်တွင်အခြားအရာများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အသုံးပြုမှုကာလအပြီး Rotary Tool သည်အပူကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုအေးစေရန်အချိန်အတန်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ကိုချက်ချင်းမထိပါနှင့်။
နောက်ဆုံးတော့သတိရပါမစ်ကြီးပါဝါ Rotary Toolsလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စိုစွတ်သောလက်ကိုမသုံးပါနှင့်,
Tool Shop Rotary Tool Premium Diamond Rotary Saw Blades Set စိန် rotary ကိုဓါးသွား သေးငယ်တဲ့ rotary မြင် လက်ကျင်းပ Rotary Saw Rotary Wood tool ကို Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို rotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံ လက် Tool ကိုဖိုင် rotary ပါဝါ Rotary Tool